Manaova aingam-panahy ho anao manokana: taratra mihoatra ny fenitra!
Aogositra 23, 2018 26 Novambra 2021
Miaina amin'ny vanim-potoana iainan'ny fiainana isika Fitness toa manjaka an'izao tontolo izao, ary ny fikatsahana vatana tonga lafatra hatrany dia tsy mijanona, saingy mety amin'ny rehetra ve izany? Salama marina ve ireo olona ireo? Tena misy lamina ve? Ahoana no hanaiky ny vatako? Mety ho fanontaniana tsy misy valiny ireo.
Etsy ambany isika dia hiresaka sy hanazava olana sasany. Raha efa naheno betsaka ny teny hoe fanekena ianao ary tsy fantatrao tsara ny dikan'izany dia eto ny toeranao. Eo moa?
Inona no atao hoe vatana tonga lafatra?
Efa nametraka an'io fanontaniana io ve ianao? Ka anio manandrama mijery fitaratra ary hijery raha tena tianao ny zavatra hitanao, mino aho fa ny ampahany lehibe aminao dia hijery ny tenanao ary hanao tsia. Tsy faly amin'ny zavatra ananany mihitsy ny olona, ​​toy izany isika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika.
Saingy hitanao, ny tsy azontsika avela dia ny olona manana ny firehan-kevitr'izy ireo mitory izay tsy marina. Mahita olona tsy tambo isaina mandefa mialoha sy aoriany ao anatin'ny fotoana fohy aho ary mitory fiainana salama izay tsy arahin'izy ireo 24 ora isan'andro ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainany sy ny antsika koa.
Olona malaza sy mpamaham-bolongana maro no mandefa atiny amin'ny tambajotra sosialy ny fanekena azy ireo, izany hoe, manandrana miresaka betsaka momba ny maha-zava-dehibe ny fanekena ny vatany araka ny tena izy izy ireo, ny fanekena ny biotype-ny, ny lesoka ao aminy, na ny fitiavana ambonin'izy rehetra fenitra.
Fa na dia ny mitaky sy mitaky izany rehetra izany aza dia mahavariana fa vitsy amin'izy ireo no faly. Betsaka ny mampiasa an'io fahefana io ho fialan-tsasatra hihinana ratsy, manana fiainana milay mahatsiravina, satria hatrany ambanin'ny lalandava dia ny hoe "tiako ny miaina toy izao ary faly aho, aorian'izay rehetra tokony hanaiky ny vatantsika izao!".
Misy ihany koa ny ampahany lehibe izay mametraka ny fahasalamana sy ny kalitaon'ny fiainana ho amin'ny fitondrana jadona manify, mitory fanekena diso, nefa miaina amin'ny zava-mahadomelina, fandidiana, fisakafoanana adala, fomba mampidi-doza ary fiainana tsy mahasalama sy mangidy.
Saingy ny olona ilay illusory taloha sy aoriana, ary ilay olona mitory ny fanekena tsy ara-dalàna dia mijaly, satria lalina dia tsy salama izy ireo. Ary tsy ny fahasalamana ara-batana fotsiny no lazaiko, fa ny fahasalamana ara-tsaina ihany koa. Ny olona iray izay te-hanana endrika modely amin'ny vidiny rehetra dia tsy tena manaiky ny tenany.
Ahoana no hanaiky ny vatako? Azo atao ve izany?
Miresaka amin'ireo olona manontany ahy foana aho hoe: "Ahoana no fandraisako ny vatako?", Mitady ny kinovanao tsara indrindra, tsy misy radicalisme, tsy mila fitaratra amin'ny tenanao ao anaty vatana fa mety tsy manohana ny biotype-nao ara-batana, raha tsy mifikitra amin'ny illusory aloha sy aoriana, jereo ny fandanjalanjana. Jereo eo amin'ny fitaratra ka jereo izay tsy mahafinaritra anao ary miady tsikelikely ny fanovana, fa mieritrereta aloha ny fiovana manan-tsaina sy mahira-tsaina. Tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny.
Manaova safidy tsara, manaova fanatanjahan-tena matetika, ary mihinàna mahasalama. Aza manahy momba ny fivoahana sy hihinana sakafo heverina ho “olon-dratsy” ho an'ireo izay mibaiko ny lalàna ary manadino ny fahasalamana amin'ny fahantrana. Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa tsy misy sakafo mampatavy anao, toy ny tsy misy maody mazika hampihena ny lanja sy vatana lavorary.
Ny olona tsirairay dia samy manana ny mahaizy azy ary ilaina sy ilaina aminao ny mijery am-pitiavana bebe kokoa sy amin'ny fikarakarana bebe kokoa ny vatanao.
Azo atao, eny, ianao hanaiky ny vatanao amin'ny fomba misy azy, ary noho io, etsy ambany no nanasarako torohevitra vitsivitsy ho fanampin'ireo efa nolazaiko nandritra ity lahatsoratra ity, izay hanampy anao hieritreritra bebe kokoa momba ilay lohahevitra . Ka andao ary!
Ajanony ny fanarahana ireo olo-malaza sy bilaogera manao fanatanjahantena vatana tsy tena izy
Miezaha mijery fitaratra ary mahita fa afaka miova ianao fa ao anatin'ny fetranao
Ataovy loha laharana ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana hatrany
Aza atao tandindomin-doza mihitsy ny fahasalamanao amin'ny alàlan'ny fenitra ambaran'ny fiarahamonina
Avelao any an-toeran-kafa ny fomba fiaina mipetrapetraka, tsy miresaka mahasalama isika fa miresaka salama
Aza miaina amin'ny toe-javatra tafahoatra, mandosira ny radika
aza manandrana ho tonga olona tsy ianao
Mitadiava aingam-panahy tena izy fa tsy olona izay miaina ivelan'ny zava-misy iainanao
Miova ho anao, tadiavo izay mety indrindra aminao.
Manaova safidy hendry ho an'ny tenanao fa tsy ny hafa.
Fantaro ny vatanao, ary mitandrema sy mitia bebe kokoa rehefa mijery azy.
Manaova hetsika tianao
Hanaja ny biotype-nao
Ny “hottie” sy ny “bandy be” an'ny Instagram dia andro ratsy ihany koa ary tsy afa-po amin'ny zava-drehetra.
MIAINA MANDALINA! Mahaiza manao izay manome anao fahafinaretana koa.
Tags:fanekenakalitaon'ny fiainanaFahasalamana ara-batanafahasalamana ara-tsaina